INGOSI: Ziyekelweni izidleke zabaqwayizi nezidakamizwa kuze kuqubuke udlame? | News24
LAST UPDATED: 2019-12-05, 19:13
INGOSI: Ziyekelweni izidleke zabaqwayizi nezidakamizwa kuze kuqubuke udlame?
Durban – Sekuyinto ejwayelekile eNingizimu Afrika ukuthi umphakathi othukuthele uzithathele umthetho ngezandla ukhala ngokuthi awusawethembi amaphoyisa.
Muva nje sekudlange izigameko zokuhlaselwa kanye nokucekelwa noma ukushishwa ngomlilo kwezindlu okunezinsolo zokuthi ziyizidleke zomahosha kanye nezidakamizwa. Lokhu kubalwa nezigameko ezisanda kwenzeka eRosettenville, eGoli.
Kulesi sigameko kushiswe okungenani izindlu eziyishumi okusolwa ukuthi zigcwala abesifazane abadayisa ngomzimba nokunezinsolo okuthi abomdabu waseNigeria yibona abangobhongoza noma abayengela laba besifazane kulo ‘msebenzi’.
Umphakathi-ke wona ukhala ngokuthi lokhu kwakha isifundo esingesihle entsheni yasendaweni nebuye isetshenziswe ukudayisa ngezidakamizwa kanye nokudayisa ngomzimba khona isencane.
Bonke abantu bakhala ngokuhudula izinyawo kwamaphoyisa
Okuqaphelekayo ngalezi zigameko ukuthi imiphakathi ngokuhlukana kwayo ihlale ikhala ngento eyodwa, ukuthi amaphoyisa ayazi kodwa awenzi lutho noma asebenzisana nalabo abangobhongoza ekugileni le mikhuba. Kwezinye izigameko kuze kube nezinsolo zokuthi uma uthi ubikela amaphoyisa kuba yiwona amaphoyisa agijima ayotshela izigebengu ukuthi ubuzoziceba.
Uzobalekela kuphi-ke uma ngabe usuphenduke isitha sesigelekeqe kanye nephoyisa, lona kanye leli okufanele engabe livikela wena liphinde liqede nobugebengu?
Khona kanye vele kungani kufanele umphakathi kuze kube yiwona obikela amaphoyisa ngezinto ezisobala nezaziwa yiwo wonke umuntu endaweni. Likhona yini iphoyisa elingazazi izidleke zezidakamizwa nomahosha? Liqala nini ukungazi? Ngoba seliyiphoyisa? Kanti lihlala kuphi lona lodwa?
Cishe kuwo wonke amadolobha amakhulu kanye nasemalokishini imbala kunezindawo osekuneminyaka kwaziwa nje ukuthi ziyisizinda sezidakamizwa kanti ezinye zidume ngokuba yisizinda somahosha – ezinye zazo amabhilidi kanye nemigwaqo edumile emiphakathini. Ngaphezu kwalokho amaphoyisa ahlale ebonakala mihla namalanga egudla kuzona lezi zindawo, kwesinye isikhathi aze axoxe nabasolwa kodwa kungaboshwa muntu.
Kungani amagama abokufika ehlale ephambili kule mikhuba?
Yini ndaba kuqondane njalo ukuthi uma kukhulunywa ngezidakamizwa kanye nokudayisa noma ukudayisiswa ngenkani ngomzimba kwabesifazane, phakathi kuhlale kunowokufika okunguyena oyaye asolwe ngokuba ngungqondongqondo ekugilweni kwale mikhuba? Banabhadi lini bona kangaka ukuthi bahlale besolwa nje ngento eyodwa abantu abahlukene?
Le nqwaba yabantu bokufika ehlale ijika nelanga ezitaladini yayingene ngemvume yokuthi izokwenza msebenzi muni kuleli? Kunabantu nje abahlale beswenke beconsa, bajika nelanga, bahamba ngezimoto baphinde babonakale bephila impilo ephezulu, kodwa akwaziwa ukuthi ivela kuphi le mali abaziphilisa ngayo le mpilo ewubukhazikhazi. Khona uma kuthiwa umuntu uze kuleli ngokuthi uzogunda, ubani owayethe kushoda abantu abakwazi ukugunda kuleli? Awakuleli kuphela yini kanti amakhanda agundwayo?
Lama bhizinisi abahlale benconywa ngawo (abokufika) uhulumeni kuthiwa akhulisa umnotho awadingeki yini emazweni abo ukuze akhulise iminotho yakhona le entengantengayo?
Kanti amaphoyisa abanjwe umathithibala yini?
Ngakolunye uhlangothi akuve yini sekumane kuyiculo nje ukuthi izidakamizwa kanye nokudayisa ngomzimba akukho emthethweni nokuthi uhulumeni uzimisele ngokukuqeda?
Njengoba kunabantu abangaka nje abasebenzisa izidakamizwa amaphoyisa angakhona yini ukubaqeda uma khona sekuthiwa ayathanda noma azimisele? Akhona yini wona amajele anele ukugquma la bantu? Mhlawumbe kungenzeka nje ukuthi nalabo abake baboshwe abasuke bebe nebhadi nje uma ngabe amaphoyisa efuna ukubonakala njengabantu abazimesele ngomsebenzi emphakathini.
Eyokudayisa ngomzimba-ke nje yinto amaphoyisa asengagcina ngakho nje ukuyigxeka uma ebona amakhamera abezindaba kodwa nawo ayazi ukuthi yinto engasoze yenzeka.
Bukuphi ubufakazi bokuthi umuntu udayisa ngomzimba?
Okokuqala nje ukuzulazula kwabantu besifazane abaveze umzimba obala akusibona ubufakazi bokuthi badayisa ngomzimba – ikakhulukazi esikhathini samanje lapho sebebaningi nabagqoka njengabo kodwa abangafuni ukuyamaniswa nabaqwayizi.
Okwesibili ukuthi noma abantu bengabhandanywa benza ucansi kodwa abukho ubufakazi bokuthi luthengiwe. Kungenzeka ukuthi bayathandana noma abathandani kodwa bavele bezwa kuthi abalwenze. Awukho umthetho ovimbela abantu abakhulile, uphinde ubakalele nesikhathi okumele basilinde ukuze benze ucansi.
Okwesithathu ukuthi ngisho othengayo angabanjwa oqotsheni ekhokhela othengwayo kodwa abukho ubufakazi bokuthi kukhokhelwa ucansi. Kungenzeka ukuthi ukhokha isikweleti noma uyamupha nje.
Ngaphezu kwakho konke lokhu, iqiniso ukuthi awukho uhulumeni ongakwazi ukulawula ukuthi umuntu wenza ini, nini, nobani ngomzimba wakhe.
Ngamanye amazwi singasho ukuthi ukwanda kwezidleke zezidakamizwa kanye nezamayengandoda kuwubufakazi bokuthi amaphoyisa aseyayivuma induku ukuthi asehlulekile, noma uma engahlulekile kufakazela izinsolo zamanye amalunga omphakathi zokuthi amaphoyisa angena kulezi zindawo aphume esesindwa amaphakethe, yingakho nje ehlale ebonakala eshalaza uma ngabe edlula kulezi zindawo noma agcine esehlukumeza laba ababika ubugebengu.